Abụ Sọlọmọn 7 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Abụ Sọlọmọn 7:1-13
7 “Lee ka ijeụkwụ gị si maa mma n’akpụkpọ ụkwụ gị,+ gị nwa agbọghọ nke na-enye onwe ya n’afọ ofufo!+ Apata ụkwụ gị yiri ihe ịchọ mma+ nke onyeọkà rụrụ. 2 Ọnụ otubo gị bụ ọkwá dị okirikiri. Ka mmanya a gwara agwa+ ghara ịkọ n’ime ya. Afọ gị bụ ikpo ọka wit, nke e ji okooko lili gbaa gburugburu.+ 3 Ara gị abụọ yiri ụmụ mgbada abụọ, bụ́ ejima nne mgbada mụrụ.+ 4 Olu gị+ dị ka ụlọ elu e ji ọdụ́ rụọ. Anya gị+ dị ka ọdọ mmiri ndị dị na Heshbọn,+ n’akụkụ ọnụ ụzọ ámá Bat-rabim. Imi gị dị ka ụlọ elu Lebanọn, nke chere ihu na Damaskọs. 5 Isi gị dị ka Ugwu Kamel,+ ntutu+ isi gị dịkwa ka ákwà e sijiri odo odo.+ Ntutu isi gị nke wụdara awụda adọrọla mmasị eze.+ 6 Nwa agbọghọ m hụrụ n’anya, lee ka i si maa mma ma dị ụtọ karịa ihe niile ọzọ na-enye obi ụtọ!+ 7 I toro ogologo dị ka nkwụ,*+ ara gị+ yikwara ụyọkọ mkpụrụ ya. 8 Asịrị m, ‘M ga-arịgoro n’elu nkwụ, ka m wee jide aka n’ụyọkọ mkpụrụ ya.’+ Biko, ka ara gị dị ka ụyọkọ mkpụrụ vaịn, ka ume ị na-ekupụta na-esi ísì ụtọ ka mkpụrụ osisi apụl, 9 ka okpo ọnụ gị dịkwa ka mmanya+ kasị mma nke ji nwayọọ na-agbada+ n’akpịrị onye m hụrụ n’anya, jirikwa nwayọọ na-aba ndị na-arahụ ụra n’ọnụ.” 10 “Abụ m nke onye m hụrụ n’anya,+ ọ bụkwa m na-agụ ya agụụ.+ 11 Bịa, onye m hụrụ n’anya, ka anyị banye n’ọhịa;+ ka anyị nọrọ n’ebe okooko osisi hena+ juru. 12 Ka anyị bilie n’isi ụtụtụ gaa n’ubi vaịn, ka anyị wee hụ ma vaịn ò puola,+ ma okooko ya ọ̀ gbawaala,+ ma osisi pọmigranet ọ̀ maala ifuru.+ N’ebe ahụ ka m ga-egosi na m hụrụ gị n’anya.+ 13 Ahịhịa mandrek+ ewepụtawo ísì ụtọ ya, ụdị ọmarịcha mkpụrụ osisi+ niile dịkwa n’ọnụ ụzọ anyị. Echekwaworo m gị ma ndị ọhụrụ ma ndị ochie, onye m hụrụ n’anya.
Nkwụ a bụ ụdị nke na-adị n’ala Palestaịn.
Abụ Sọlọmọn 7